Maxaa sababay in qurba-joogta Itoobiya ay dalkooda ku soo laabtaan? | Hangool News
Maxaa sababay in qurba-joogta Itoobiya ay dalkooda ku soo laabtaan?
Boqolaal qof oo reer Itoobiya ah oo qurba-joog ahaa ayaa haatan ku laabanaya dalkaasi ka dib isbadalladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka dhaqangeliyay ra’iisalwasaare Abiy Axmad.
Isbadalkaasi waxaa ka mid ah in uu keenay sharci u ogolaanaya in dadka qurba joogta ahi ay dalka ku soo laabtaan si ay qayb uga noqdaan horumarinta dhaqaalaha dalkaasi.
Muddo sanado ah ayaa dhaqaalaha dalkaasi waxaa aad u maamulayay dowladda.
Sida ay sheegtay dowladda dalkaasi Itoobiya, qiyaastii laba milyan oo qof oo Itoobiyaan ah ayaa ku nool qurbaha.
Qiyaastii kalabar dadkaasi qurbajoogta ahi waxay ku nool yihiin dalka Mareykanka, gaar ahaan Washington DC.
Abiy Bister wuxuu maqaaxi ku leeyahay gudaha Washington DC. Ma uusan arkin waddankiisa ku dhawaad labaatan sano, balse hadda wuxuu ka fiirsanayaa inuu ku laabto Itoobiya si uu halkaasi ganacsi uga billaabo.
“Qof waliba hadda wax wanaagsan ayuu kuu sheegayaa. Waxaan xasuustaa waayadii hore dadku ma aysan wada hadlayn … laakiin hadda waxaad arkeysaa isbedel badan oo dhanka wanaagsan ah, kaasi oo ah in dadku ay qaddarinayaan xaalka wanaagsan ee dalka uu wajahayo”ayuu yiri Abiy Bister.
Marka laga soo tago isku dayga ah in la abuuro xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya 80-ka qowmiyadood ee ku nool dalkaasi Itoobiya, hadda dawladdu waxay diirada saartay dib u habaynta dhaqaalaha si ay gacan uga geysato furfuridda dhaqaalaha oo dalka looga dhigo mid u furan maalgashiga shisheeyaha.
Itoobiya waxay leedahay mid ka mid ah dhaqaalaha ugu kobaca badan adduunka, haseyeeshee sidoo kale waxay leedahay tiro badan oo dhallinyaro ah oo shaqo la’aan ah.
Sida laga soo xigtay bangiga dhexe ee dalkaasi Itoobiya, lacagaha dibadda looga soo diro Itoobiya ayaa aadu sii sare kacay sanadihii la soo dhaafay, waxaana dalkaasi loo diraa lacag gaareysa saddex bilyan oo doolar, iyadoo Itoobiyanka ku nool dibadda ay lacag u diraan qoysaskooda, ayna maalgashadaan ganacsiyada maxalliga ahi.
Dadka ka faa’iidaysanaya isbeddelkaasi waxaa ka mid ah Yohannis Gebreyesus oo caan ku ah cunno karinta. Ka dib wax kabadan siddeed sano oo uu wax ka baranayay kana shaqeeynayay Mareykanka iyo Faransiiska, waxa uu haatan ku laabtay Itoobiya, halkaa oo uu ganacsi ka billaabay.
Gebreyesus wuxuu ka qeybgalaa barnaamij todobaadle ah oo TV-ga dalkaasi ka baxa oo lagu soo bandhigo cunnooyinka ugu wanaagsan dalkaasi Itoobiya, waxa uuna doonayaa in cunnooyinka dalkaasi ay dunida caan ka noqdaan.
Vera Song oo ah xoghayaha fulinta ee guddiga arrimaha dhaqaalaha Afrika u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa sheegeysa in isbadalka dowladdu sameysay laga dareemi doono dalkaasi, waa haddii bay tiri si wanaagsan loo dhaqangeliyo ka hor doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonto bisha Agosto ee sanadkan.